अमेरिकामा नेपाली संचार माध्यम माथि छद्मभेषी नेपालीद्वारा सांगठनिक आक्रमण | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १ फाल्गुन २०७५, बुधबार १८:२० लेखक नेपाली जनता
पाल्पामा १०५ भन्दा बढी बिरामी, दुईको अबस्था गम्भीर
तानसेन । पाल्पामा छिमेकीको भतेर खाँदा १०५ जना भन्दा बढी बिरमी भएका छन् । छिमेकीको घरमा १३ औं दिनको…
चुरोटको फालिएको ठूटाबाट बन्न सकिन्छ मालामाल !
काठमाण्डौ । नेपालमा चुरोट पिउनेको संख्या निकै माथि छ । यही कारण चुरोटको विजिनेशको आकार पनि निकै ठूलो छ…
प्रहरी अस्पतालमा एआईजी पोखरेलकाे दादागिरि : नेतृत्वकै गैरजिम्मेवारीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुबीच विवाद चुलियाे !
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पताल नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुबीच विवाद बढ्दै…
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुरमा रक्षामन्त्री पोखरेलले स्वागत गरे
काठमाडाैँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आज नेपाल अाएका छन । उनकाे नेपाल भ्रमण जनकपुरबाट शुरु…
काठमाडौं । सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरम र सरकारलाई समर्थन गरेको तर सहभागी नभएको राष्ट्रिय जनता पार्टी सत्ता कि संघर्ष…